Fanitarana ny “ port’’ Toamasina : Nampiseho fahavononana ny Japonay -
AccueilRaharaham-pirenenaFanitarana ny “ port’’ Toamasina : Nampiseho fahavononana ny Japonay
05/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandritra ny fitsidihana no nanazavan’ny tale jeneralin’ny seranan-tsambon’i Tokyo amin’ny fahaiza-manaon’ izy ireo eo amin’izay lafiny ara-potodrafitrasa .Tsiahivina hatrany moa ny ezaka fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina hiarahana amin’ny firenena japonais, izay hanomboka ny taona 2018 ho avy izao, ary aharitra 7 taona ny asa. Nandritra ny fitsidihana sy ny fihaonana natao ihany koa no nampahafantaran’ ireo teknisianina ny sarin’ ny seranan-tsambon’ i Toamasina aorian’ny fahavitany, izay hitondra aina lehibe ho an’ny fampandrosoana ara-ekonomika ho an’i Madagasikara. Fantatra mandritra io fanitarana ny seranan-tsambon’ i Toamasina io ny kajy izay ataon’ ny teknisianina japonais amin’ ny fanenana ny andro hanatanterahana ny asa, amin’ ny alalan’ ny fitaovana sy ny teknolojia izay eo am-pelatanan’izy ireo. Ireo fitaovana ampiasaina ireo rahateo izay hahatohatra ireo izay mety ho loza voajanahary mafy toa ny horohoron-tany izany. Miray zotra amin’ izany ihany koa ny fiarovana ny seranan-tsambo, ary ny fanenana ireo akora ampiasaina mandritra sy aorian’ ny asa izay mety hanimba ny tontolo iainana. Ankoatra ny asa fanitarana dia mbola ho azon’ny seranan-tsambon’i Toamasina avy amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ny firenena japonais ny fitantanana ny seranan-tsambo amin’ ny alalan’ny fametrahana teknolojia amin’ny informatika.
Ny tompon’andraikitra voalohan’ny NEC Nobuhiro Endo mihitsy kosa no nitsena ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitsidihany ny orinasa goavana indrindra amin’ ny lafin’ny teknolojia . Ity farany izay nanambara ny fahavononany hanampy an i Madagasikara amin’ ny fahaizan’izy ireo eo amin’ny tontolon’ny informatika sy ny teknolojia vaovao. Ny delegasionina izay notarihin’ ny filoham-pirenean ihany koa no nampahitan’ ny NEC ny hiaka farany amin’ ny vokatra vokarin’izy ireo , izay ny iray tamin’ izy ireo dia ny filoha Hery Rajaonarimampianina no nanao ny fanandramana. Ity teknolojia ity dia fahafantarana sy fiarovana amin’ny alalan’ ny tarehy sy ny feo mandritra ny fisiana hetsika goavana, na amina orinasa, na ihany koa toeram-panjakana izay mahavory olona maro.Ity hiaka farany vokarin’ny orinasa NEC ity dia tian’ izy ireo ho i Madagasikara no hampiasa azy voalohany . Nandritra ny fandalovan’ ny filoham-pirenena tao amin’ny orinasa NEC no nilazany fa “hazakazaka amin’ ny lafin’ny fampandrosoana ara-teknoljika tokoa no misy izao, ary izany dia sehatra iray ahafahana mamorona asa” hoy hatrany ny nambarany
Tapak’andro maraina ny dian’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina tatsy Japon, no nitsidihan’ny orinasa NEC niaraka tamin’ ireo delegasionina miaraka aminy. Ny NEC izay hiarahan’ny rehetra mahafantatra fa isan’ireo manana ny lenta ambony indrindra maneran-tany amin’ny lafin’ny teknolojia, dia ny informatika sy ny fifandrasain-davitra izany . Niray zotra tamin’ ny fitsidihana ihany koa ny tao amin’ ny seranan-tsambon’i Tokyo izay goavana indrindra eran-tany. Nahafahan’ ny firenena japonais nampahafantatra ny hiaka farany amin’ ny teknoljia izay vokarin’izy ireo ny fitsidihana izay nataon’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina eo amin’ny fandrosoana sy fivoarana ary ny ara-potodrafitrasa. Anisan’ny efa nahita tombony moa ny fiaraha-miasan’ny Japonais, izay efa hiara-hiasa amintsika, sy efa nilaza amin’ny hanome famatsiam-bola amin’ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina.